allsanaag.com - Puntland oo Ka Hortimi Qolyihii Olymibikada Isku Caleema Saaray
Laascaanood waxay xukunka Isaqland ama Soomaaliyadiid ku dhacday 15-10-2007. Waxay dulmi ku jirtay:	3208	Days	05	Hours	34	Minutes	19	Seconds	Horjoogaha Soomalidu Ma Danaystaa? Ma Daryeelaa?
Puntland oo Ka Hortimi Qolyihii Olymibikada Isku Caleema Saaray
Written by Shanle	(Radiodaljir) Wasiirka Sh,Sh,Dh & ciyaaraha Puntland oo maanta shir-saxaafadeed ku qabtay Gaalkacyo ayaa si kulul u cambaareeyay gudiga Olombikada oo dhawaan madax loogu doortay magaalada Muqdisho.
C/wali Xirsi C/dulle (Indha-guran) oo shir-saxaafadeedkiisa ay kala qayb galeen Dr, C/qaadir Maxamuud Jaamac (Dhagacade) iyo bahda Sportska gobolka ayuu ku sheegay inaan lagala tashan haba yaraatee doorashaddii dhawaan gudiga Olombikada loogu doortay gudoomiye cusub, taasoo uu ku sheegay xaq darro laga galay dhinacyadii mudnaa in miisaan laga siiyo.
Wasiirka ayaa sheegay isagoo tix galinaya dhalinta hanka uu ka hayo ciyaaraha inay qaadaceen aqoonsashada gudigaasi isla markaana uusan ahayn mid ay Soomaalidu u dhan tahay.
Sidoo kale gudoomiye ku xigeenka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya C/rashiid Xasan Xirsi oo jooga Kanada ayaa daljir u sheegay inay sharci darro ahayd doorashadaasi.
Si kastaba Puntland ayaa u aragta doorashada gudigaas oo aan lagu tala galin aysana ka qayb galin jabinta mid ka mida sharciyo horay loogu heshiiyay.